Però: Bilaogera avy ao Ica · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2018 4:20 GMT
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Ny tanànan'i Ica no tena voakasiky ny horohorontany Peroviana manokana vao haingana. Maro amin'ireo fanavaozam-baovao sy antso ho an'ny firaisankina no avy amin'ireo bilaogera ao an-tanànan'i Lima. Nikaroka ireo bilaogera avy ao an-tanànan'i Ica ny mpanoratra ao amin'ny GV, Juan Arellano ary nahita ireto bilaogy ireto.
Melancólico al despertar's [ES] Oliver na “DRMAD” manoritsoritra ny tenany ho toy ny “geek, mpanonofy, mpankafy 100% ny Linux, sarotiny, somary kamo, fa tena olona mahafinaritra 🙂 “. Nivadika ho matotra tampoka ny bilaoginy izay nifantoka tamin'ny teknolojia, lalao an-tserasera ary olana hafa mifandraika teo aloha raha namely ny tanànan'i Ica ny horohorontany. Ny votoatiny vao haingana dia ahitana sary izay mampiseho ny fahasimban'ny fiangonana ao an-toerana sy ny endri-tanàna.
Lahatsoratra iray tena mahaliana manasongadina ny fomba fiezahan'ny mponina ao Ica mba hikarokaroka
Sary avy amin'ny DRMAD ary nampiasaina araka ny lisansa Creative Commons.
El ingenio del peruano no tiene límites 🙂 Minutos después del terremoto, yo veía en las manos de los transeúntes únicamente celulares. Al día siguiente empezaron a aparecer carretillas con baterías, para cargar el celular 🙂 S/. 2,00 por una hora de carga. Algunos grifos también han estado dando sus tomacorrientes para la carga de celulares gratuitamente.
Tsy misy fetra ny fikaratahan'ny Peroviana 🙂 Minitra vitsivitsy taorian'ny horohorontany, dia nahita finday teny an-tanan'ny mpandalo aho. Sarety kely misy bateria no niseho ny ampitso. Namahana 2 solsa isan’ ora izy ireo mba hamahana finday. Nampiasa ny angovon'izy ireo ihany koa ireo tobin-dasantsy sasany mba hamahanana finday maimaim-poana.
Manoratra fisaorana sy ireo lisitra ahitana izay tena ilain'ireo mponina namana ao Ica ihany koa izy:
Misaotra an'ireo rehetra nanahy momba anay. Misaotra betsaka ny Lion's Club, izay nanome fanampiana anay. Raha te-handefa fanampiana ianao, dia ireto no ilain'ireo faritra tena voakasika mafy:
* Bodofotsy sy akanjo tsy tantera-drano (satria avy ny orana omaly alina tany Chincha)
* kidoro sy/na fandriana
* Sakafo tsy mora simba
* Rano, rano betsaka
* Fahana sy jiro
Diavolo [ES] dia bilaogera avy any Ica, saingy monina ao Lima. Namoaka lahatsoratra izy hoe, “Vonjeo, Horohorontany!“
Misy olona tsy diso fanantenana amin'ny Telefonica ve? Izaho, na dia mpanjifa afa-po amin'ny Claro aza taorian'ny nanaovana antso voalohany (amin'ny finday misy Claro) mankany Ica. Dia mbola tsy afaka miantso amin'ny finday amin'ny Movistar aho. Ankehitriny dia milaza aminay izy ireo fa tokony ampiasaina amin'ny antso vonjimaika ihany izany. Amin'ny fotoana tahaka izao, mbola m isy antso ankoatra ny hamehana ihany ve?
Androany maraina, raha nihinana sakafo maraina aho dia niakatra 350 ny isan'ny maty, ary ny ankamaroany dia tao amin'ny faritra misy ahy (Ica). Nandositra ireo gadra tao amin'ny amin'ny fonjan'i “Tambo de Mora – Chincha”, maherin'ny 60% n'ny tanànan'i Ica no rava, ka raha fehezina, dia korontana tanteraka no ao Ica.
Raha mijery izay havana mbola velona ny hafa ao Ica, manana fianakaviana lavitra aho (manantena ny hahita ny antsasany hafa aho amin'izao fotoana izao).
Sueños de Azul [ES] dia bilaogy nosoratan'i Jaime G. Wong Chacaltana, milaza tena fa Kristiana monina ao Ica. Namoaka vaovao nohavaoziny amin'ny findainy izy.
Matetika manavao ny vaovao ao amin'ny findaiko amin'ny alalan'ny gprs
8:06 – Misy olona tsy mahafantatra hoe andro inona izao. Tratry ny tsingerintaona nahaterahana ny reniko sy ny anabaviko.
7:32 – Mampatahotra kokoa ny fandrobana tsy tahaka ny hovitrovitra aorian'ny horohoron-tany. Ny alina lasa teo dia nahenoana bala sy polisy. Tao Santo Domingo, nisy ny fandrobana tao an-tsena sy ny magazay. Tany San Martin, nilaza toy izany koa izy ireo. Mila herinaratra haingana araka izay azo atao izahay. Ity no DEGENERANDO haingana. Raha tsy miasa haingana izy ireo, dia tsy ho ela dia ho korontana. Etsy ankilany, nandositra ny hovitrovitra goavana aoriana izahay, ary avy eo niatrika ireo mpandroba.
19:53 – Tsy tonga ny herinaratra ary lany ny bateria. Hatramin'izao, tsy nisy mpino naratra mafy na dia iray aza. Ny sasany very trano na ampahany amin'ny tranony, saingy mijoro izy ireo. Tsy fankahazoan-kevitra momba ny “La Mar”, tsy rava izy, fa mampidi-doza ny fampiasana azy. Rindrina atahorana hianjera. Tsy misy herinaratra na rano. Lany ny harena. Misy ireo olona mbola mila fanampiana. Raha fintinina: Pisco, Cañete, ary Ica no tena voakasik'izany. Tonga mba hanampy anay ireo rahalahy sy anabavy avy ao Lima. Misaotra noho ny vavaka ataonareo, niaro anay Andriamanitra. Maro ny olona tsy mahatakatra ny fomba niavian'izany avy amin'Andriamanitra. Lehibe loatra ho an'ny saintsika ny planiny. Manana tanjona sy antony ny zava-drehetra nomanina ho an'ny tsirairay amintsika. Mba hahitana ny avana, dia tsy maintsy mahatsapa orana aloha.
11: 24-Mitsidika ireo mpino. Voakasika mafy i Comatrana, trano maro no nirodana, mbola ilaina ny fanampiana. Mbola tsy misy herinaratra sy rano izahay. Mahita kamiao tonga avy any Panamerican (Lalambe) aho ny fahatsapako toa tsy mizara tsara ny entana izy ireo. Sarotra ny mitsara amin'ny fijerena lavitra. Fantatro fa manao ezaka lehibe izy ireo. Misaotra ny rehetra noho ny fanampian'izy ireo. Mila fanampiana bebe kokoa izahay. Ny tranon'ny Julio Coello dia natao tamin'ny biriky tany ary misaotra an'Andriamanitra, tsy nianjera izany. Tena malemy, mampidi-doza ny mijanona ao.
Hatramin'izao, salama ny mpino rehetra. Tsy manana vaovao avy any Cañete aho. Pisco sy Comatrana no tena voakasika. Ica voakasika kely ihany. Tsy misy herinaratra na rano. Mitohy ny hovitrivotra aoriana. Manomboka ho lany ny loharanon-karena.
Sol Negro [ES] dia bilaogy nosoratan'i Paul Guillén, poeta avy an'i Ica. Misy sary ao amin'ny tranonkalany izay milaza fa “misaona i Sol Negro,” ary ahitana vaovao momba ny fanampiana sy ny lisitry ny vaovao momba ny fifandraisana amin'ny Transparencia, IDL ary ny Vokovoko Mena Peroviana.
Fandikana sy fandraisana anjara avy amin'i Eduardo Avila